|lọ | Mbubata Importgbọ M | Bubata Car na UK
Bubata & Debanye aha ụgbọ ala gị na UK
Importgbọ M Mbata nwere ike ibuga, gbanwee, nwalee ma debanye aha ụgbọ ala n'akụkụ ọ bụla n'ụwa na UK.
GW WITHNWOO AS ADMU
Ndị na-ebufe ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ
Nnukwu netwọk gị n'ụlọnga, na-ekpuchi njem ụgbọ mmiri, usoro mbupụ na mbupu akpa na UK.
Naanị uzo uzo IVA nkeonwe
Ikike pụrụ iche iji gbanwee n'enweghị nsogbu, nwalee, ma debanye aha - naanị na ụlọ ọrụ anyị.
Ndepụta DVLA ọsọ ọsọ
Kpọtụrụ DVLA raara onwe ya nye iji hụ na ndebanye aha nke ọma.
Kedu ụdị ụgbọ ala anyị na-ebubata?
Ọtụtụ narị ndị ahịa otu ọnwa na-ahọrọ anyị ibubata ihe niile site na nnukwu ụlọ ahịa ruo na nnukwu ahịa.
Ọ bụrụ na inwere ụgbọ ala ahụ maka ọnwa 6 ma biri na mpụga EU maka ọnwa 12, ịnwere ike ibubata ụtụ ụgbọ ala gị na-akwụghị ụgwọ. Anyị na-eme nke a site na iji Nyefee nnabata ngwa.
Zụta ụgbọ ala?
Anyị na-ejikwa usoro nhichapụ kọstọm na nnọchite gị, wee hụ na ọ dị mma na HMRC. Nke a na - eme ka ego VAT na ọrụ kwụọ ụgwọ.
EU na UK?
Anyị na-emeso HMRC maka ntinye EU NOVA gị ma hụ na ndebanye aha gị na UK na-eduzi na njikwa ego na njikwa oge.
Inbanyela na UK?
Anyi ga eji obi uto weghaa mbubata gi ma oburu na ugbo ala gi adila na UK. Inweta ụgbọ ala gị gbanwere, nwale ma debanye aha ozugbo enwere ike.
Ozugbo ebubara anyị na omenala anyị, anyị na-eme ndokwa ịkwaga ụgbọ njem na ngwa anyị iji gbanwee, nwalee ma denye ụgbọ gị maka ụzọ UK.
Ọrụ ibubata ụgbọala zuru oke!
Kedu ihe ndị ahịa anyị na-ekwu?
Daalụ maka ilekọtara mbubata ụgbọ ala m. Amaara m na ọ bụ ihe ịma aka siri ike, mana ekele ndị kọntaktị gị nwere ike inweta akụkụ ndị ziri ezi ma dozie nsogbu niile n'egbughị oge na afọ ojuju.
Ana m ekele gị na ndị otu maka ịme nke a ngwa ngwa na nke ọma. Ọ bụrụ na enwere m ihu ọma na m ga-ebubata ụgbọ ala ndị ọzọ dị mma n'ọdịnihu m ga-ejide n'aka na ị ga-eji ọrụ gị ọzọ.
Steve (2008 Ferrari F430 Scuderia)
Daalụ maka ịrụ ezigbo ọrụ na iweta ụgbọ ala anyị na UK wee mezue ndokwa dị mkpa. Anyị ga-agba mbọ iziga ọtụtụ ndị ahịa Dubai ụzọ gị ka o kwere mee.
Neil & Karen Fisher (2015 Mitsubishi Pajero)
Epekele ndị ahụ abịarutela, ọtụtụ ekele maka enyemaka gị niile, ọ bụwo ihe obi ụtọ isoro ụlọ ọrụ gị rụọ ọrụ na agaghị m enwe nsogbu ịgbasa okwu ahụ.
- Trever n'okpuru (Landrover Series 1)
Nweta aka taa maka ọnụego akọwapụtara na mbubata gị. A na-edekọ aha anyị ọnụahịa ma tinye ụgwọ niile - na-akwụsị ihe egwu ọ bụla nke ụgwọ zoro ezo!
Ihe kpatara ịhọrọ ụgbọ ala m:
Ndị ọkachamara EU na ndị na-abụghị EU
Nbupu mbufe zuru ụwa ọnụ
Naanị ụzọ nyocha nke IVA naanị maka ụgbọ ala ndị njem na UK
Nnukwu ndị otu nnabata, nnwale na ndị ndebanye aha
Oge ngwụsị oge ntụgharị n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ọrụ ọ bụla na UK
Nnukwu ụlọ ọrụ na ndị mmekọ na gburugburu ụwa
Na ngbanwe ọkụ ụlọ na nkwadebe nnwale nnabata
My Car Import na-ebubata ụgbọ ala na UK si n'akụkụ ụwa niile maka afọ 25 gara aga. Anyị na-enye ndị ahịa na-achọ ịbubata ụgbọala n'ime UK otu ụzọ dị mfe iji were usoro ahụ n'onwe ha. Anyị ewulitela azụmaahịa anyị na ọrụ ụlọ n'ụlọ ọkachamara na-ekpuchi akụkụ ọ bụla nke mbubata ụgbọ gị ma kwụsị nsogbu ndị nwere ike ịnwe ma ọ bụrụ na ịnweghị ndị otu iji nyere gị aka. Anyị nwere ihe ọmụma zuru ezu na nke zuru ezu chọrọ iji mee mkpebi ibubata ụgbọala na UK dị mfe - anyị nọ ebe a ịnye ihe ngwọta ibubata ụgbọ gị na UK.
Ọ bụrụ n ’ibugharị na UK, zụta ụgbọ ala ọ bụla si mba ọzọ ma ọ bụ bute ụgbọ ala Europe na mba ahụ, anyị nọ ebe a iji nyere aka.
Jiri Mbubata Cargbọ M maka mbubata ụgbọ gị, a ga-emesi gị obi ike ebe anyị na-eji azụmaahịa anyị zuru ụwa ọnụ na netwọkụ azụmahịa, ihe ọmụma ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ nyocha nke IVA na-arụ ọrụ nke ọma iji mee ngwa ngwa na ọnụ ahịa gị na ụgbọ ala gị n'ụzọ azụ ebe a na UK .
Kedu ihe ndị ahịa anyị na-ekwu banyere ahụmịhe nke ibubata ụgbọ ala ha na United Kingdom na My Car Import?
4.5 si na kpakpando ise dị na Trustpilot
Dabere na 6,470 reviews
Dejupụta akwụkwọ arịrịọ a na-arịọ maka maka nkwupụta mbubata ụgbọala.